Caliber 5.0 inosarudza kujoina fashoni yemhando yakasviba, pakati pezvimwe zvakagadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
Ingori pasi pegore rapfuura, vagadziri veimwe yeakanakisa maturusi ekugadzirisa e-mabhuku vakakanda v4.0 yesoftware yako. Pakati pezvinhu zvitsva zvavakaunza, isu taifanira kuchinjira mukushandisa iyo Qt WebEngine webhu zvemukati zvinopa injini, iyo yakawedzera kugona kweChromium. Kwemaawa mashoma, tinogona kutotora Caliber 5.0, uye imwe yezvinhu zvitsva izvo zvinosanganisira hazvishande, asi nhasi hatingataure kuti haina kukosha.
Rutsva urwo rwandiri kutaura nezvarwo ndirwo rwaunoona mumusoro wekutora: ikozvino pane inowanikwa yakasviba modhi izvo zvinotaridzika zvirinani pane mazhinji emakomputa edu, kunyanya kune ayo atinoshandisa dema kana grey theme yeanoshandisa system. Pazasi iwe une runyorwa rweakatanhamara matsva ayo asvika neCaliber 5.0.
Caliber 5.0 inosimbisa
Sezvatinoverenga mukati Iyi link, kubva kwatinogona zvakare kuwana izere runyorwa rwe shanduko dzakaunzwa kubva pa v4.0 kuenda ku v5.0, Caliber 5.0 inosanganisira izvi zvinowedzera:
Iye zvino inoshandisa Python 3. Kazhinji, vashandisi havafanirwe kucherechedza chero chinhu, asi panogona kunge paine mamwe maaddons kana mapulagini anozotadza, uye zvichave kusvikira vavanogadziridza vagadzirise
Mikana yekuburitsa mameseji. Iko kujekesa kunogona kuve mavara, kusimbisa, nezvimwewo, uye manotsi anogona kuwedzerwa pairi. Shanduko dzinogona kuchengetwa kuma EPUB.
Iyo E-bhuku muoni ikozvino inotsigira portrait modhi uye kurudyi-kuruboshwe kuruboshwe.
Yakavandudza kutsvaga iko iko zvino kunotibvumidza kutsvaga mazwi akazara uye kunyangwe zvirevo.
Rima modhi, uye ivo vanoona kuti inogoneswa otomatiki muWindows uye macOS. Izvi zvingangoshanda pakugovera kweLinux futi, asi kazhinji unozoda kumisikidza nharaunda inoshanduka CALIBRE_USE_DARK_PALETTE = 1.
Vashandisi vanofarira tinogona ikozvino kurodha pasi Caliber 5.0 kubva pawebhusaiti yaro yekurodha pasi, yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanogona kuiisa sezvakatsanangurwa mu iyi imwe link, Kubva pane yako kodhi kana yako yekumisikidza kwatiri. Asi pachezvangu, nekuda kwekugara kwave vachindishandira, ini ndaikurudzira kumirira maawa mashoma uye kuisa iyo Flatpak vhezheni. Ngatisarudzei isu isu tinosarudza, isu tatova neshanduro nyowani, yakakwana kwazvo kudhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Caliber 5.0 inosarudza kujoina iyo yakasviba modhi craze uye inosanganisira yakawanda inobatsira kuvandudza
Unogona kutaura kuti musiyano uyu wakarongedzwa sei muLinux "CALIBRE_USE_DARK_PALETTE = 1", handione chero kupi kwekuzviitira muCaliber.
Mhoro. Edza IZVI:
sudo nano /etc/profile.d/calibre.sh
Ipapo iwe unofanirwa kuisa iyo tambo (kana kutumira kunze CALIBER_USE_SYSTEM_THEME = 1).
sudo service gdm kutanga
Ngatione kana zvichishanda. Shuwiro yakanakisa.
Puppy Linux 9.5 inosvika kuwedzera hupenyu hwePC yako yekare ... kana iri 64bits